Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zeNepal Breaking » Ummangaliso woSuku lwezoKhenketho lweHlabathi eNepal luyavulwa kwakhona?
Ukhenketho lokuzonwabisa • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Culinary • inkcubeko • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • Icandelo lokungenisa izihambi • Iindaba zeNepal Breaking • iindaba • abantu • komzila Ngoku • I-WTN
Namaste Usuku loKhenketho lweHlabathi 2021! KwiNepal oku kunokuthetha ukuba iihotele kungekudala zingamkela iindwendwe zangaphandle kwakhona. I-Nepal iya kuba nakho ukubonisa iindawo zayo ezivulekileyo, amachibi, iintaba kunye nokutya kubakhenkethi abafuna inkululeko yokusasazeka ukuze bonwabele eyona ndawo intle kweli lizwe.
Iinkokheli zokhenketho ezinolwazi eNepal zilindele ukuvulwa kwakhona kwelizwe laseHimalaya kukhenketho.
USuku lweHlabathi lezoKhenketho eNepal aluzukubonakala nje kuphela, kodwa iya kuba ngumbhiyozo ophathekayo kwilizwe ekulindeleke ukuba libethe iintsimbi zokuvula kwakhona iindwendwe.
Ngeenyanga zokutshixa, iNepal ikulungele ukwamkela iindwendwe ngezandla ezishushu.
Kunokubakho isizathu sokuba urhulumente waseNepal athathe isigqibo sokubhiyozela uSuku lwezoKhenketho lweHlabathi eNepal ngokwasemzimbeni.
Ukuba kukho naliphi na ilizwe emhlabeni apho ukungahambelani kwezentlalo kungengxaki, iya kuba yiNepal. URhulumente waseNepal waligcina ilizwe livaliwe kangangeenyanga ezininzi ukunqanda ukusasazeka kweCoronavirus. Ekuqaleni kobhubhane iNepal yabonwa njengemodeli kwihlabathi malunga nendlela yokukhusela abakhenkethi.
Iinkokheli zokhenketho lwasekhaya bezikulungiselele ukwenziwa ngokutsha. Kwintlanganiso yeeveki ezimbini ezidlulileyo, owayesakuba yi-CEO yeBhodi yezoKhenketho yaseNepal, u-Deepak Raj Joshi uzimisele ukucela urhulumente ukuba asuse iimfuno zokuvalelwa kwabahambi abagonyelweyo ukukhuthaza ukhenketho eNepal.
Ukubonisa ukuba abasebenzi bezokhenketho abaphambili ngoku bagonyiwe yimeko yeqela ukuba icandelo lezokhenketho kufuneka libhengezwe livulekile nguRhulumente waseNepal.
Inethiwekhi yoKhenketho yeHlabathi Usihlalo uJuergen Steinmetz wayesisithethi kumnyhadala wakutsha nje weenkokheli zezoKhenketho eNepal bexoxa ngenqanaba elilandelayo lokuvula kwakhona ukhenketho kunye nommandla weHimalaya eNepal, eBhutan, eIndiya naseTibet.
U-Deepak Raj Joshi ukhokela Inzala yeHimalaya Group yoNxibelelwano lweHlabathi lezoKhenketho.
Kwiiveki ezimbini ezidlulileyo eli qela belixinzelela ukuqala kwakhona kwee-visa ekufikeni nasekukhuthazeni uvavanyo lwe-PCR kwisikhululo seenqwelomoya.
Ngelixa amacandelo eNepal kutshanje oicinywe phantsi kwemida ethile, ezinjengeeholo zemiboniso bhanyabhanya kunye neeresityu ezingama-50%, kodwa bekukho akukho hlaziyo kuthintelo lokuhamba lweNepal kwiinyanga ezintandathu.
Usuku lokhenketho lwehlabathi lowama-2021, luya kubhiyozelwa ngokwasemzimbeni eNepal.
Umphathiswa Wezenkcubeko, uKhenketho, kunye nezoPhapho eNepal ubhengeze ukuba nge-27 kaSeptemba umbhiyozo omkhulu uzakubanjwa ngemaski kunye nokuhamba kude kwezentlalo.
Umxholo woSuku lwezoKhenketho kwiHlabathi liphela kulo nyaka uthi “uKhenketho loHlumo oluBandakanyayo. ”
Kuyathenjwa ukuba umxholo uza kunceda ukukhulisa ukuqonda ngakumbi kweeNjongo zoPhuhliso oluZinzileyo lwe-UN. Inkqubo esesikweni iququzelelwa kwiholo yeBhodi yezoKhenketho yaseNepal.
Ividiyo ebhalwe nguScott MacLennan, eTN Nepal
Akukho hlaziyo lwaseburhulumenteni okwangoku malunga nenqanaba lokuphinda kuvulwe ukhenketho eNepal, kodwa yimithombo yolwazi eyiyo eTurboNews lindela ukuba esi sibhengezo siza kuza kungekudala.
Ukufika kweNepal kubakhenkethi abagonywe ngokupheleleyo kulindeleke ukuba kuvunyelwe kubemi abavela kumazwe amaninzi. Ukuvalelwa bodwa kwezi ndwendwe akusayi kuphinda kufuneke.
UScott MacLennan, eTurboNews eNepal wathi: Le yindlela entle yokubhiyozela uSuku loKhenketho lweHlabathi.
Ulwazi oluthe kratya malunga noKhenketho lwaseNepal lunokufumaneka www.welcomenepal.com